UNgqongqoshe wamaphoyisa uhole Imbizo | News24
UNgqongqoshe wamaphoyisa uhole Imbizo
KUBANJWE Imbizo enkundleni yezemidlalo eThembeni ngoLwesihlanu oledlule.
Le mbizo ibibanjelwe ukuthola isixazululo ngoku bhebhetheka kobugebengu esifundeni iLembe.
UNgqongqoshe wamaphoyisa, uMnuz Nathi Nhleko uhole lo mcimbi ebambisane nemeya yaKwaDukuza uMnuz Ricardo Mthembu.
Umphakathi unikezwe ithuba lokubuza uNgqongqoshe ukuthi ikuphi okuhlelwe uMnyango wamaPhoyisa ukubhekana nesimo sobugebengu kulesi sifunda.
Izikhulumi ezihlukene zibeke izikhalo ngobugebengu obukhona emphakathini.
Umphakathi unxuswe ukuthi ungazithengi izimpahla ezintshontshiwe ngoba lokhu kwenza ukuthi izigebengu ziqhubeke nokuntshontsha.
Okunye umphakathi okhale ngakho ukuthi ama-tavern avulwa ubusuku bonke.
UNgqongqoshe, uMnuz Nathi Nhleko uthe inkinga yama-tavern inkinga enkulu ezweni lonke njengoba ama-tavern kubuye kube indawo lapho khona okusetshenziswa izidakamizwa.
Uthe: “Le nkinga iyamufaka uhulumeni ngoba umbuzo uthi, njengoba ama-tavern esemaningi kangaka anikezwa ngubani igunya lokusebenza. Anikezwa uhulumeni,” kusho uNgqongqoshe.
Uqhube wathi izinhlaka zika hulumeni ezigunyaza ukusebenza kwama-tavern kumele ziku bukisise ukuthi ukugunyazwa kwama-tavern kunga lawulwa kanjani.
Amanye amalungu omphakathi abeke amaphoyisa icala lokusebenzisana nezigebengu.
UNgqongqoshe uthe: “Akusilona iqiniso ukuthi ukubulawa kwamaphoyisa kungoba amaphoyisa ahlangene nezigebengu. Kufuneka ukuthi umasigxeka, sigxeke ngedlela yokuthi sakhe, sakhe nawo amaphoyisa ngoba amaphoyisa awomphakathi, akusiwona akahulumeni. Uma sivumela isimo sokuthi kwenziwe ubugebengu bokuthi kubulawe amaphoyisa kusho ukuthi sizibulala thina singu mphakathi,” kusho yena.
Umphakathi uphinde wakhala ngokushoda kweziteshi zamaphoyisa ezindaweni zabantu bebala elimnyama.
Elinye ilungu lo mphakathi licele ukuthi kulungiswe indaba yemingcele phakathi kweziteshi zamaphoyisa.
Uthe: “Ukusuka Esthundu uya eMatimatolo u-45 kilometres, kodwa ukusuka Esthundu uya kwaMaphumulo u-10 kilometres kodwa ngenxa yemingcele kumiwa isikhathi eside kuthiwa kulindwe imoto ephuma eMatimatolo kodwa uthole ukuthi ingozi yenzeke eduzane nakwaMaphumulo,” kusho leli lungu.
Umphakathi uphinde wakhala ngoku bhebhetheka kwezidakamizwa njengoba kwezinye izikole kudayiswa izidakamizwa emagcekeni esikole.
UMnuz Mandla Nyawo, oneminyaka engu-39, uthe akajabulanga ngendlela uNgqongqoshe aphendule ngayo ngoba umbuzo wakhe awuphendulwanga.
UMnuz Nyawo ubekade ebuze ukuthi amaphoyisa ahlele ukwenzani ngokuntshontshwa kwezimoto ziyodayiswa eMozambique.
Ngenyanga edlule, uMnuz Nyawo nomndeni wakhe bahlaselwa izigebengu ekhaya labo.
UMnuz Nyawo uthe bangenelwa izigebengu ebusuku ezamdubula emva kwalokho zathatha okhiye bemoto yakhe, zathumba nonkosikazi wakhe.
Uthe: “Izigebengu zathumba unkosikazi wami zahamba naye zayomulahla eManguzi, eduze nomngcele waseMozambique,” kusho uMnuz Nyawo.
Uqhube wathi into abefuna ukuyithola njengoba ehambele Imbizo ukuthi uhulumeni uhlele ukwenzani ngalesi simo sokuntshontshwa kwezimoto zidayiswe eMozambique.